Umthandazo wokuba yonke into ihambe kakuhle. ? Emsebenzini kunye novavanyo.
Umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle emsebenzini okanye elingo sisenzo sokholo sokwenyani.
Ngamaxesha amaninzi kuyakholelwa ukuba sisenzo esinomnqweno okanye sibonisa ubuthathaka okanye ukungakwazi ukwenza izinto ngokwethu, kodwa oku akuyonyani nakancinci.
Isidingo senkxaso yaphezulu sibonisa ukuba sizizidalwa zokomoya kwaye sifuna wonke umntu abe kwimeko esichaphazelayo okanye kuba siza kuqala ishishini elitsha.
Eyona nto icetyiswayo kukuba wenze lo mthandazo malunga nokuba kathathu ngemini, ungawandisa ngeentsuku ozifunayo.
Inokwanela ngeentsuku ezintathu okanye isicelo onaso sinokufuna ezinye iintsuku ezimbalwa.
Inyani yile yokuba ekuphela kwento efunekayo ukuze umthandazo ube nokusebenza lukholo lwenziwa ngawo.
1 Umthandazo wokuba yonke into ihambe kakuhle-Injongo
1.1 Umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle emsebenzini
1.2 Thandaza ukuze yonke into ihambe ngolingo
1.3 Umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle ekusebenzeni
2 Uthatha ixesha elingakanani usebenze?
Umthandazo wokuba yonke into ihambe kakuhle-Injongo
Isizathu sesi sivakalisi sicacile kwaye inokusetyenziswa kuzo zonke iimeko ezinokwenzeka.
Amaxesha amaninzi siqala iprojekthi entsha apho singekho khona ikhulu leepesenti ngokuqinisekileyo kodwa sisafuna ukuzama, kuba kwezo meko kunjalo umthandazo Kubalulekile
Ukucela uThixo ukuba asikhokele kwizinto esizenzayo okanye kuye ukuze asincede senze izinto ngokulungileyo kubalulekile.
Amangenelo amatsha anokubakho kwicandelo lezifundo, apho inkoliseko kaThixo ihlala iluncedo.
Okanye singacela ukuba umntu ophakamileyo asincede ukuba siqhubeke kubudlelwane obuvele bathathe i-nuances engafunekiyo.
Ngokwefonti, loo mthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle inokusetyenziswa kwiimeko ezininzi.
Unokwenziwa nosapho lonke kwaye ngale ndlela, xa sisonke sicela injongo enye, umthandazo uba namandla ngakumbi.
Khumbula ukuba ilizwi likaThixo lithi ukuba babini okanye bathathu bavumelane kwaye bacele kuThixo uya kuvuma izicelo ezenziweyo.
Umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle emsebenzini
"Thixo wam, ndiyakucela ukuba xa ungena emsebenzini ubunyani bakho, ndibongoze ubukho bakho ukubulela ngala mhla undinike wona. Ndicela ukuba ibe lusuku loxolo kwaye ugcobe lubabalo lwakho, ububele bakho, uthando lwakho kwaye yonke into yenzeka ngokwesicwangciso sakho esifanelekileyo.
Namhlanje, ndiyacela ukuba zonke iiprojekthi zam ziqhutywe, imibono yam iyenziwa kwaye nokuba nokufezekiswa okuncinci ebomini bam kunye nomsebenzi wam yinxalenye yobungqina bakho obuzukileyo.
Nkosi Yesu, uwusikelele umsebenzi wam, abaphathi bam, abathengi bam, oogxa bam kunye nabo bonke abantu abenza le nkampani iphumelele.
Bawo waseZulwini, vuselela ukuthanda kwam kunye namandla am ukuze ndiwenze umsebenzi wam ngeyona ndlela.
Olu suku, ndinqwenela intliziyo enobubele ukuba ndihlale ndikhonza abathengi bam kunye noogxa bam ngobubele. Nkosi, ndiphe umlomo oncumisayo, iingqondo ezinethemba kunye namehlo axabisa yonke into abayibona ekujikelezile.
Susa amagama akhubekisayo kum kwaye undenze umntu olungileyo.
Ndinike izandla zozibini ukuze ndisebenze ndihlala ndihlonipha usapho lwam, ndinike inkuthalo yokuvuka imihla ngemihla ngoncumo.
Nkosi ndikhokele kuwo wonke umzuzu endiziva ndiphulukana nenyakatho, yiba namandla kunye nesibindi sam, ndinike intliziyo enesibindi njengakho.
Bawo wethu osemazulwini, Ndenzele olu suku kunye nawo wonke umsebenzi weyona nto intle, ndithathe esandleni sakho.
Kukho iimeko zomsebenzi okanye imingeni emitsha yomsebenzi ethi ngaphandle kwamathandabuzo ifuna uncedo olungaphezulu emthandazweni.
Buza Yonke into ihamba kakuhle emsebenzini Ngumthandazo ukuba inokwenziwa yonke imihla, ngaphambi kokuba ahambe endlwini.
Isiko elilungileyo esinokuthi silisebenzise ekhaya kukuthandazela umthandazo omnye kusuku ngaphambi kokushiya wonke umntu ekhaya kusasa.
Ngale ndlela sinceda abancinci okanye abo babuthathaka elukholweni ukuba bathembele ngakumbi kumandla omthandazo.
Thandaza ukuze yonke into ihambe ngolingo
“Mgwebi osikelelekileyo, nyana kaMariya, ngamana umzimba wam ungabhanga okanye igazi lam liphalazwe. Apho ndiya khona, izandla zakho zindibambile.
Abo bafuna ukundibona kakubi banamehlo kwaye ababoni kum, ukuba ngaba banezixhobo abazilimazi, kwaye ngokungabikho kokusesikweni abandiholeli.
Ngengubo ebeyigutyungelwe nguYesu ngoku ndiyinxibile, ukuze ndingalimali okanye ndibulawe, nakukubethwa kwejele andizukuhambisa. Ngokudibana kukaBawo, Nyana noMoya oyiNgcwele.
Ukujongana netyala elisemthethweni lixesha lokuqwalaselwa kakhulu kunye nokuxhalabisa apho umthandazo wokuba yonke into ihambe kakuhle kunokuba luncedo kakhulu.
Ukwazi ukuhambisa amandla angalunganga kwaye ubenakho ukulungiselela ezo zilungileyo kwimeko apho yonke into ethethwayo neyenziwayo ithathelwa ingqalelo kumanqanaba agqithisileyo inokuba lusindiso lwethu kuphela.
Unokuthandaza ngaphambi naphakathi kwexesha ityalaSisenzo esiya kusinceda sigcine uxolo kwaye senze izigqibo ezilungileyo.
Umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle ekusebenzeni
Owu Yesu, uliLizwi eliyinyani, unguBomi, ukuKhanya, uyindlela yethu, Yesu, Nkosi yam endiyithandayo, owathi: uya kuvulelwa, (Chaza into ofuna ukuyiphumeza). Thandaza oobawo abathathu Bethu, Thoba ooMariya abathathu kunye neGlass ezintathu.
O Yesu, unguNyana kaThixo ophilileyo, ulingqina elithembekileyo likaThixo el mundoUnguThixo unathi, uYesu iNkosi yeNkosi, owathi "Nantoni na oyicelayo kuBawo eGameni lam uyakukunika" ngokucela uMariya, uMama wakho osikelelweyo, ngokuthobekileyo nangentliziyo yam yonke ndicela ngokholo olukhulu kuwe Bawo eGameni laKho ukuba undiphe olu ncedo ndikufumanisa kunzima ukulufumana ngeendlela zam ezibuthathaka: (Phinda ngethemba elikhulu oko ufuna ukufumana). Thandaza oobawo abathathu Bethu, Thoba ooMariya abathathu kunye neGlass ezintathu.
Owu Yesu, unguNyana kaMariya, Ungumoyisi wobubi kwaye ukufaUyisiqalo nesiphelo, uYesu, uKumkani weeKumkani, owathi: «Izulu noMhlaba liyakudlula, kodwa ilizwi lam aliyi kudlula» ngokuncenga kukaMariya, uMama wakho osikelelweyo, ndiziva ndiqinisekile ukuba isibongozo siya kuvunywa: (Yitsho isicelo kwakhona ngokuzinikela okukhulu).
Ngaphambi kokungena kwigumbi lokuhlala kuhlala kukho uloyiko olukhoyo lokungazi ukuba kungenzeka ntoni, yiyo loo nto ukwenza umthandazo ukuze usebenze kunye nenkqubo yonke ibalulekile.
Eyona nto icetyiswayo yenza lo mthandazo kunye nesigulana ngaphambi kokungena kwigumbi lokusebenza, kufuneka ucele ngokuqinisekileyo kwaye ungqale ngqo kwinto esifuna ukuyibona.
Ekugqibeleni, kulungile ukubulela, ngale ndlela amandla amnandi adluliselwa abaluleke kuzo zonke iinkqubo zempilo.
Uthatha ixesha elingakanani usebenze?
Imithandazo ayinamaxesha acacileyo.
Ngokwesiqhelo, kuxhomekeka kwimeko, kungathabatha imizuzu embalwa okanye iiyure ezimbalwa ekusebenzeni.
Into ebalulekileyo kukuba uqinisekile ukuba uza kuqhuba kakuhle.
Ngale ndlela, umthandazo ukuze yonke into ihambe kakuhle emsebenzini, ukugweba kunye nokusebenza kuya kusebenza ngokukhawuleza kwaye iyasebenza.